micro စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း Pump DS2504 - DESUN
ဖုန်းနံပါတ်: + 0086-15913807200
သေးသေးလေး Brushless DC က Pump
AC-DC က Aquarium စုပ်စက်
မူလစာမျက်နှာ Applications စုပ်စက်
PC ကို computors ရေမွေ့ရာဘုံဘိုင်
ကျယ်ပြန့်အသုံးပြု application ကိုစုပ်စက်
ငါးမွေးကန် Wave ကို Pump
Computer ကိုရေ-အအေးပိုက်ပြင် pump
ရေကော်ဖီစက် Micro နဲ့သောက်သုံး - Pump
micro DC က Boost Pump
micro-DC က Pump
သုံးအဆင့် Brushless DC က Pump (Adjustments မြန်နှုန်း)
သုံးအဆင့်မြန်နှုန်းမီးဖိုချောင်နှင့်အိမ်သာသုံးစက်ကိရိယာများ minia ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစားအသောက်တန်း Micro-pump DS3904HF
သေးငယ်တဲ့ပန့်များ DS3903 များအတွက်အိမ်သူအိမ်သားကရိယာ
သေးငယ်တဲ့ပန့်များ DS3901 များအတွက်အိမ်သူအိမ်သားကရိယာ
micro စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း Pump DS2504
micro စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း Pump DS2503
Micro-ညှစ်ထုတ်လိုက် DS2501 များအတွက်အစားအစာတန်းကော်ဖီစက်
စားနပ်ရိက္ခာတန်း Micro-pump DS2502
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစမ်းရေတွင်း၌ mini ကိုစုပ်စက် DS4503
သေးသေးလေး DC ကနေရောင်ခြည် centrifugal စုပ်စက် DS4505 brushless
ပိုက်လိုင်းသေးသေးလေးရေစုပ်စက် DS3913 ဖိအား
ပိုက်မွေ့ရာ mini ကိုရေစုပ်စက် DS6002
micro သုံးအဆင့်မြန်နှုန်းမော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်ပန့်များ ...
12V 2L / မိနစ်,2မီလီယံဘဝကို> Micro နဲ့ brushless DC 30000hours ...
သေးသေးလေး brushless DC ကစုပ်စက် 1, အင်္ဂါရပ်: Brushless DC ကစုပ်စက်အဘယ်သူမျှမဖြီးပွတ်တိုက်မှုကြောင့်, လှုံ့ဆျောရဟတ်နဲ့အတူဒွန်တွဲအမြဲတမ်းသံလိုက် brushless DC ကမော်တာသည်, လိုင်ဖွဲ့စည်းမှု၏ centrifugal လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အရည်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအိမ်ရာတည်ဆောက်ပုံ၏နိယာမကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမ မီးပွား; မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ဖြီးမော်တာရှည်အသက်, အနိမ့်ဆူညံသံ။ ယင်းမော်တာ DC က brushless စုပ်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ် brushless DC ကစုပ်စက်ကိုအောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်: 1) စုပ်စက်ဝင်ရိုးတစ်ခုပိတ်ထားတဲ့ Stat ဖြစ်လာ ...
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: L ကို A / C, D ကို / A, D ကို / P ကို, T / T, payoal
သေးသေးလေး brushless DC ကစုပ်စက်
Brushless DC ကစုပ်စက်ကြောင့်, လှုံ့ဆျောရဟတ်နဲ့အတူဒွန်တွဲအမြဲတမ်းသံလိုက် brushless DC ကမော်တာသည်, လိုင်ဖွဲ့စည်းမှု၏ centrifugal လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အရည်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအိမ်ရာတည်ဆောက်ပုံ၏နိယာမကိုအသုံးပြုသည်
ဖြီးပွတ်တိုက်မှု, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမီးပွားအဘယ်သူမျှမ; မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ဖြီးမော်တာရှည်အသက်, အနိမ့်ဆူညံသံ။
ယင်းမော်တာ DC က brushless စုပ်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ် brushless DC ကစုပ်စက်ကိုအောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်:
1) စုပ်စက်ဝင်ရိုးလုံးဝမီဒီယာယိုစိမ့်ရှောင်ရှား, ထိုပြောင်းလဲနေသောတံဆိပျကနေပိတ်ထားတဲ့အငြိမ်မတံဆိပျဖွစျပါ၏ ဒါကြောင့်ကုန်းရေနှင့်အပြည့်အဝရေစိုခံနိုင်ပါတယ်
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချ 2) ဘယ်သူမျှမကသီးခြားချောဆီအရည်ကြည်များနှင့်အအေးရေ,
3) အနိမျ့ပါဝါစားသုံးမှုမြင့်မားထိရောက်မှု, damping နှင့် damping, အစုပ်စက်နှင့်မော်တာအပေါ်သက်ရောက်မှုအခါဘုံဘိုင် cavitation တုန်ခါမှုအပေါ်မော်တာတုန်ခါမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချ
4) ရဟတ်အဆိုပါကြွေရိုး, ထိုမော်တာ, ဘုံဘိုင်ကာကွယ်မှုအပေါ်ချော်လိမ့်မယ် Overload
5) အသွားအပြန်များအတွက်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု. Brushless DC ကဘုံဘိုင်ကာဗွန်ဖြီးအသွားအပြန်, high-performance ကို wear-ခံနိုင်ရည်တိကျစွာကြွေရိုးတံနှင့်ဖိုက်စွပ်အိတ်များအသုံးပြုမှုများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ, ဆေးထိုးတန်ဆာနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်အတူတကွသံလိုက်ကနေတဆင့်လက်ကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ် ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်မျက်ရည်, ကြောင့်
ယခုဘဝသည်အလွန်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည် DC ကသံလိုက်စုပ်စက် brushless ။ အဆိုပါ epoxy potting, 100% ရေစိုခံရဟတ်၏ stator နှင့်ရဟတ်လုံးဝအထီးကျန် stator နှင့်ဆားကစ်ဘုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏သံလိုက်အထီးကျန်မှုတွေစုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
အမြဲတမ်းသံလိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပစ္စည်းများ, အနိမ့်ဆူညံသံ, အသေးစားအရွယ်အစား, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့စုပ်စက်ခန်ဓာကိုယ်။ အမျိုးမျိုးသော parameters တွေကိုပု stator Wind မှတဆင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်နှင့်ကျယ်ပြန့်ဗို့အားမှာ operated နိုင်ပါသည်။
အားသာချက်များ: ရှည်သောအသက်, အနိမ့်ဆူညံသံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 35dB မှတက်, ရေပူရေအေးလည်ပတ်မှုအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ယင်းမော်တာ၏ stator နှင့်ဆားကစ်ဘုတ်အစိတ်အပိုင်းများရေအောက် installation နဲ့အပြည့်အဝကာကွယ်မှုများအတွက်ရဟတ်ထံမှ epoxy နှင့်လုံးဝအထီးကျန်နှင့်အတူ encapsulated နေကြတယ်
ရေ, high-performance ကိုတိကျစွာသံမဏိရိုးသို့မဟုတ်ကြွေရိုးတံနဲ့အတူရေစုပ်စက်ဝင်ရိုး, မြင့်သောတိ, ကောင်းသောစျေးမှာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
စားနပ်ရိက္ခာတန်း Micro-pump 2504HF
1) သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း
2) သွင်းကုန် PPE ကုန်ကြမ်း
3) ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးချဲ့ဖို့, ဖိုက်ဝက်ဝံပြီးသွား
100 အ℃၏ 4) အများဆုံးအလုပ်လုပ်အပူချိန် (optional)
5) အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဗို့ 3V, 24V အများဆုံးလည်ပတ်မှုဗို့အားနှစ်ခု AA ကိုဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်
6) Epoxy potting, IP68 ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် () ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / ပြောင်းပြန် polarity ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / ရေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပိတ်ဆို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်
ပုံစံ Volts (V) AMPS (က) မက်စ်စီးဆင်းမှု (LPM) မက်စ်ဓာတ်လှေကားဦးခေါင်း (မီတာ) ပါဝါကို (W)
3.flow / ခေါင်းကိုကွေး
စသည်တို့ကိုငါးမွေးကန်, သန့်ရှင်းထည်, မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်း, ရေအိပ်ရာ, ခြေမအနှိပ်, soilless စိုက်ပျိုးခြင်း, စမ်းရေတွင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, အသေးစားအိမ်ထောင်စုကရိယာ,
1) ဤကုန်ပစ္စည်း centrifugal စုပ်စက်ပိုင်, တည်နေရာအောက်ကအရည်အတွက် install လုပ်ပြီးသားရပါမည်!
2) 0.35mm ထက်ပိုကြီးတဲ့နိုင်ငံခြားအမှုန်များနှင့်သံလိုက်အမှုန်တွေနဲ့အရည်ကိုမသုံးပါနဲ့။
3), အရည်မပါဘဲ pump Non-ကိုသုံးပါ! မြင့်မားတဲ့အပူချိန် wear နဲ့မျက်ရည်ထုတ်လုပ်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်မှာအလှည့်အနေဖြင့်ရဟတ်တားဆီး။
တစ်နိမ့်သောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုတဲ့အခါ 4) အရည်အေးခဲသို့မဟုတ် viscous ဖြစ်လာပါဘူးသေချာပါစေ။
5) ဒါဟာဆောင်းကာလကိုစုပ်စက်အတွင်းပိုင်းရေခဲပေါကျကှဲကာကွယ်တားဆီးဖို့, အနိမ့်အပူချိန်နှင်းခဲထဲကချီမြှောက်ကြိုမြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
မဟုတ်ရင်တိုးမြှင့်ဆူညံသံများနှင့်တုန်ခါမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ပြည်တွင်းရေးရှင်းလင်းရေး၏ 6), DC brushless စုပ်စက်တိကျသောထိန်းချုပ်မှုမရှိ, စည်းချက်,!
ယခင်: အိမ်သူအိမ်သားကရိယာသေးသေးလေး DS2503 ညှစ်ထုတ်လိုက်
နောက်တစ်ခု: micro-အစားအစာတန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုပ်စက် DS3305
သေးသေးလေး Brushless DC ရေ Pump
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း Brushless သေးငယ်တဲ့ DC ရေ Pu ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W> 100degC ရှည်သောအသက် Sma 30000hrs ...
24V5မီလီယံ 9L / မိနစ်အရည်အသွေးမြင့် Long ကဘဝကအစားအသောက်တန်း ...
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချတရုတ်အရည်အသွေးမြင့်စားနပ်ရိက္ခာ gra ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W DC ကစူပါတိတ်ဆိတ်အရည်အသွေးကောင်း coolin ...
Med များအတွက် 12V / 24V DC ကစုပ်စက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေ centrifugal ...
နေရပ်လိပ်စာ: Dongcheng ခရိုင်, Dongguan စီးတီး, Longhua လမ်းမကြီး Winton စက်မှုပန်းခြံ, အဆောက်အဦးကို C, 3rd Floor